Wed, Nov 13, 2019 at 8:28pm
स्थानीय तहको ४८ पदका लागि २८१ को उम्मेदवारी #आहा खबर# उपचारका लागि विदेश जान सरिफलाई पाकिस्तानी सरकारको अनुमति #आहा खबर# नौ करोड बिगो बराबरको राजस्व छली गर्ने विरुद्ध मुद्दा #आहा खबर# अफताबको पक्षका अझै २९ वकिलले बहस गर्न बाँकी ! #आहा खबर# ‘नेपालको जलस्रोत र बङ्गलादेशको प्राकृतिक ग्यासः आर्थिक समृद्धिको वाहक’ #आहा खबर# कूटनीतिक संवादबाट मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न माग #आहा खबर# नेपाली सेनाद्वारा मस्यौदा चुहावट गर्नेलाई सचेत #आहा खबर# ओली–नेपालबीच चार घण्टाको लगातार वार्ता ! ‘आइसब्रेक’ भएकै हो त ? #आहा खबर# देउवा नगएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेन #आहा खबर# चन्द्रविनायक तथा भैरवनाथलाई चावहिलबाट पशुपतिसम्म घुमाइँदै #आहा खबर# लागुऔषधसहित भारतीय नागरिक पक्राउ #आहा खबर# लठ्याउने सुई लगाई आफन्तबाटै बेचिइन् बालिका #आहा खबर# विपद् व्यवस्थापनका लागि ३० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गरिने #आहा खबर# संशय पैदा भएको विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ : राप्रपा #आहा खबर# त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४५ औँ दीक्षान्तमा १० हजारको आवेदन #आहा खबर#
बुधबार, १८ आषाढ २०७६,	– नारायणी रजौरे .
असारको प्रचण्ड गर्मी । दाङको गढवा यसै पनि गर्मी हुने ठाउँ । वरपर गाउँका खेतबारी पनि खाली र उजाड नै छन् तर, केही पर पुगेपछि भने हरियाली भेटिन्छ रेशम खेतीको ।
गढवा गाउँपालिका वडा नं ४ हडैया गाउँ अहिले रेशम खेतीका कारण चिनिन थालेको छ । गाउँको करीव ६० विघा जमीनमा फैलिएको छ यो खेती । यसले हरियाली त छरेकै छ, गाउँको शोभा पनि बढाइदिएको छ ।
केही वर्ष अघिदेखि हडैया गाउँमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा रेशम खेती गर्ने अभियान नै थालिएको छ । यस अभियानका अगुवा मानिनुहुन्छ धादिङका किसान महेशदत्त अधिकारी ।
सबै गाउँले छक्क परे । किम्बुका पात टिप्दै रेशम कीराका लार्भाहरुलाई खुवाउँदै, हुर्काउँदै कोकुन उत्पादन गर्न थालें । यो प्रक्रियाले उनीहरुमा चाख पनि बढायो ।
उहाँ धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नं ४ भल्टारका बासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँले नै यहाँ रेशम खेती शुरु गर्नुभएको हो । उहाँकै प्रयासमा हडैया गाउँ अहिले रेशम खेतीबाट हरियाली भएपछि अरु किसानलाई पनि प्रेरणा मिलेको हो ।
शुरुमा खाली रहेको १० विघा जमीन भाडामा लिएर रेशम खेती थाल्नुभएका अधिकारी अहिले पनि यसैमा रमाइरहनुभएको छ । राम्रो आम्दानी गर्न सकिने देखेर ३३ वर्षीय अधिकारीले ३ वर्ष अघि रेशम खेती थाल्नुभएको हो । बुबाले धादिङमा ३६ वर्षदेखि यही खेती गरिरहनु भएको र बुबाकै प्रेरणाबाट यस खेतीमा लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आगामी दिन रेशम खेतीलाई अझै विस्तार गर्ने योजना उहाँको छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ – “दाङमा यसको सम्भावना राम्रो देख्छु । जमीन पनि पर्याप्त भएकाले यहाँ आएर खेती गरेको हुँ ।”
यहाँ आएर रेशम खेती गर्नुप¥यो भन्दा गाउँलेहरुले शुरुमा विश्वास नै नगरेको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ । “जब मैले बाँझो खेतबारीमा रेशमका बिरुवा रोपेर ढकमक्क पारें, सबैमा विश्वास पलायो,” उहाँले भन्नुभयो । डेढ वर्षमा बाँझो बारी हरियो भयो । त्यसपछि रेशम कीराका लार्भा ल्याएर उहाँले पाल्न शुरु गर्नुभयो । अधिकारी भन्नुहुन्छ – “सबै गाउँले छक्क परे । किम्बुका पात टिप्दै रेशम कीराका लार्भाहरुलाई खुवाउँदै, हुर्काउँदै कोकुन उत्पादन गर्न थालें । यो प्रक्रियाले उनीहरुमा चाख पनि बढायो ।”
कोकुन उत्पादन भएर त्यसबाट गाउँमै धागो उत्पादन हुन थालेपछि किसानहरु यस खेतीप्रति आकर्षित भएको अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीले अहिले कोकुनबाट धागो निकाल्ने काममा गाउँका १५ जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ । उहाँले गरेको खेती देखेर हडैया गाउँ र त्यस आसपास अन्य गाउँका किसानहरु पनि यस खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
अहिले यहाँ विभिन्न छ वटा समूह र केही किसानले व्यक्तिगत रुपमा ५० विघा जमीनमा रेशम खेती गरिरहेका छन् । दाङमा तयार भएको कोकुनबाट धागो निकाल्ने, प्रशोधन गर्ने र कपडा बनाउने काम भने उहाँले धादिङबाट गर्दैआएको आउनुभएको छ । उहाँका उद्योगहरु धादिङ र काठमाडाँैमा रहेका छन् । अब केही समयपछि दाङबाटै प्रशोधन गर्ने र कपडा बनाउन थाल्ने उहाँको योजना छ ।
सबै खर्च कटाएर वार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बताउनुहुने अधिकारी आफ्नो कमाइप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । एक वर्षमा चारदेखि पाँच पटकसम्म कोकुन उत्पादन गर्ने सकिने हुँदा आम्दानी पनि राम्रैसँग लिन सकिने उहाँको अनुभव छ ।
आफूले गरेको खेती देखेर अहिले गाउँका धेरै किसान उत्साहित भएर यसको खेतीमा लागेका र त्यसबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको उहाँको भनाइ छ । यहाँका किसानहरुले उत्पादन गरेको कोकुन उहाँ आफैंले किन्ने र त्यही धागो प्रशोधन गरेर बेच्ने गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार रेशम कीराले उत्पादन गर्ने कोकुन प्रतिकेजी रु ५०० पर्छ । रेशमलाई सेतो सुनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यसको खेती पनि अन्य खेतीको तुलनामा महङ्गो छ ।
“मेहनतका साथ यसमा लागे छिट्टै राम्रो आम्दानी लिन सकिने भए पनि केही समस्या छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ – “यहाँ सिँचाइको अभाव छ । त्यस्तै, कीरा पाल्ने घर पर्याप्त छैनन् ।” यहाँ उत्पादन हुने कोकुनलाई यहीँ प्रशोधन गर्ने योजनामा रहनुभएका उहाँ कपडा बुन्ने तान भइदिए यहीँ कपडा नै तयार गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । रेशम खेती हेर्ने विज्ञ उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या पर्ने गरेको छ । प्रविधिको अभावमा यहाँ उत्पादन गरेको कोकुनबाट धागो निकालेर धादिङमा लगी उहाँले कपडा बुन्ने गर्नुभएको छ । उत्पादित धागोमध्ये २० प्रतिशतबाट कपडा बनाएर बेच्ने गरेको र अरु सबै धागो अमेरिका, जापान, लगायतका देशहरुमा नेपालका व्यापारीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गत वर्ष उहाँले दाङमा उत्पादित धागोबाट बनाइएका साडी काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा लागेको प्रर्दशनीमा लगेर पनि बिक्री गर्नुभएको थियो । अहिले गढवा गाउँपालिका वडा नं ४ हडैया गाउँमा मात्र ५० बिघा, गोबरडिहामा १० बिघा गरी जम्मा ६० बिघा जमीनमा सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा रेशम खेती गरिएको छ ।
सोही ठाउँका २९ वर्षीय रामलक्ष्मण शाहले पनि यसपटक आफ्नो दुई बिघा जमीनमा यसको खेती थाल्नुभएको छ । अधिकारीबाट प्रेरणा पाएरै यसको खेती थालेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, गढवा–४ गोबरडिहाका ३२ वर्षीय अन्जित चौधरीले पनि दश बिघा जमीन भाडामा लिएर रेशम खेती गरिरहनु भएको छ । धान, मकै, गहँु जस्ता परम्परागत खेती भन्दा रेशम खेतीबाट यथेष्ट आम्दानी लिन सकिने भएकाले आफूहरु यस खेतीतर्फ आकर्षित भएको यहाँका किसानले बताएका छन् ।
रेशम खेती गरेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन दिन गत वर्ष प्रदेश ५ को सरकारले कीरा घर निर्माणका लागि साढे ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सो रकमबाट दुईवटा कीरा घर निर्माण भैरहेको चौधरीले बताउनुभयो ।
यस्तै, गढवा गाउँपालिकाले पनि यसपटक रेशम खेती गर्ने किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ भने प्रदेश सरकारले रेशम खेतीका लागि रु ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
बाबुराम भट्टराईद्वारा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई 'ओप्पन च्यालेन्ज' !
नौ करोड बिगो बराबरको राजस्व छली गर्ने विरुद्ध मुद्दा
अफताबको पक्षका अझै २९ वकिलले बहस गर्न बाँकी !
‘नेपालको जलस्रोत र बङ्गलादेशको प्राकृतिक ग्यासः आर्थिक समृद्धिको वाहक’